Global Voices teny Malagasy » Chile: Ny fahaterahana indray taorian’ny voina vokatry ny horohorontany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Mey 2010 6:21 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Voina
Fanamarihan’ny mpanoratra: Ity lahatsoratra manaraka izay naverina navoaka  ity no nahazo ny laharana voalohany tamin’ny fifaninanana blaogy tao amin’ny “Global Voices” niaraka tamin’ny “ OCD Iberoamérica . Ireo hafa tafakatra tamin’ny dingana famaranana dia efa notaterina tany amin’ny lahatsoratra teo aloha .
Lahatsoratr'i : Isidora Barroso  “The Rebirth After the Tragedy“
Antso fanairana tampoka ho an’i Chile ny datin’ny 27 febroary vao nangiran-dratsy, nihovitrovitra ny tany ka nampihoraka ireo olona niharan-doza tamin’ny hiaka nanaitra sy nampihorohoro izay nanova tanteraka ny fiainan’ny mponina tao aminy.
Fiantombohan’ny loza vokatry ny horohorontany nahatratra maridrefy 8.8 tamin'ny maridrefy Richter fotsiny io izay nampitanondrika ny “saina ahitàna kintana tokana” tao anatin’ny fisaonana tanteraka.
Ny hovitrovitry ny tany dia narahina fahatairana nampahory, onjan- dranomasina niakatra avo be, raha amiko manokana dia tao anatin’ny 48 ora farafahakeliny no niainanay ny loza tao anatin’ny haizina…… Ny fotoana nahatsiravina indrindra sy nahitana faharavàna indrindra nandritry ny tontolo andro dia ny fahitàna andiana jiolahy tao Concepcion nanararaotra ny fisian’ny loza, ka nandroba izay rehetra hitany teny amin’ny làlany ary koa nampietry ny voninahitry ny firenena iray manontolo.
Androany, efa ho 3 volana taorian’ny loza izao, nifoha indray I Chile…. Fa teto kosa, nitamberina ny fahatsiarovana ireo namoy ny ainy ary niaraka tamin’ny finoana mahery vaika fa mbola ho tafarina indray izahay, satria tsy mbola nandohalika teo anatrehan’ny ady izahay, ary tsy ity akory no hiavaka amin’ny rehetra. Izany no herin’ny vahoaka Chilien, ny ràn’ny mpitolona izay mikoriana ao anatin’ny vatan’ny mponina tsirairay avy.
Ny fifohazana dia tsy azo faritana fotsiny amin’ny hoe finiavana te hanao zavatra, fa eo ihany koa ny fikarohana hevitra mivaingana sy tetikasa miantefa any amin’ny fananganana ny trano sy ireo tranobe miezinezina nianjera, toy izany ny toe-tsain’ny vahoaka Chilien. Tsara ho fantatra fa ity tany midadasika ity dia fonenan’ny horohorontany, mbola ratsy noho izany aza, fialokalofan’ny tsy fihetezana ara-jeografika amam-polony. Ilaina ny fahalalàna izany zava-misy izany mba ahafahana manomboka fanorenana vaovao ary raha ny eritreritro dia izay zavatra izay no tsy noeritreretintsika ka nandany fotoana nanorina teo amin’io toerana io ihany.
Zava-dehibe ny mahalala fa raha mirefy 6,500 kilometatra eo ho eo ny morontsirak’i Chile, tsy mahagaga raha isika no iharan’ny fahatezeran’ny ranomasimbe sy ny tsunamis . Noho izany, fotoana izao tokony hamoahana volavolan-dalàna mandràra ny fanorenana trano sy sekoly eny amin’ny faritra amoron’ny ranomasina izay mora voafoakany amin’ny fotoanan’ny horohorontany, mampahafantatra ireo faritra tsy azo antoka, miaraka amina loko iray manokana mampitandrina ny olona fa tafiditra amin’ny faritra mamoa-doza izy ireo. Raha ny zavatra henoko teny amin’ny manodidina, ny faritra manakaiky ny ranomasina dia tokony atao toerana atokana ho an’ny mpizahatany sy atokana ho amin’ny resaka fialamboly, eny amoron’ny ranomasina dia ahitàna trano fisakafoanana, trano filokàna, trano fisotroana, fandihizana na fanaovana fandraharahana samihafa. Tokony hisy drafitry ny governemanta izany momba ny fanabeazana ny mponina eo amin’ny fihetsika tokony hasehony rehefa misy horohorontany
Raha momba ny fanorenana sekoly no resahina, dia tsapako fa miompana amin’ny “fanorenana” ny governemanta mba hanomezana fahafaham-po ny mponina sy itazonany ny reharehany hoe “ mitodika any amin’ny fanabeazana ny tanjon’ny governemantanay satria nahaforona sekoly miisa 800 izahay.” Mampalahelo anefa fa manefa ny vidin’ireo rehetra “nanorina” ny fitiavantenany sy ny lazany isika, nahatonga mpianatra aman’arivony tsy niditra an-tsekoly hatramin’ny volana aprily farany teo. Fantatray tsara fa tokony hiasa ho an'i Chile izahay, saingy tsy ho an'ny tanjona ara-politika mba ho voafidy indray. Raha tsy maintsy hanorina isika dia aleo atao am-pamendrehana izany ary ny fitaovana entina anaovana izany dia ny fitsinjovana ny faharetan’ny rafitra sy ny fiarovana ireo ankizintsika sy ny mpampianatra.
Farany sady ny tena zava-dehibe indrindra, handeha isika hifantoka amin’ny fanabeazana ny mponina hialàna amin’ny fahazazàna ka ny foto-kevitra dia ny fampianarana ny maha-olom-pirenena sy ny fifanajana satria ny manan-danja kokoa noho fianarana manampy sy manala dia ny fianarana ny fahaiza-miaina eo amin’ny fiaraha-monina.
It pains me to witness the pain of my people caused by the earthquake, my heart shrinks with each of their stories, but what hurts the most is to see a Chilean trampling the dignity of others.
Nahaontsa ahy ny nanatri-maso ny fijalian’ny vahoakako vokatry ny horohorontany, tohina ny foko isaky ny maheno ny tantaran’ny tsirairay amin’izy ireny, fa ny tena nampalahelo ahy indrindra dia ny fahitàna Chileana iray manitsakitsaka ny haja amam-boninahitry ny hafa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/05/27/6292/
 lahatsoratra manaraka izay naverina navoaka: http://www.ocdiberoamerica.com/globalvoices/2010/05/isidora-barroso/
 lahatsoratra teo aloha: https://globalvoicesonline.org/2010/05/13/chile-thoughts-about-the-earthquake-and-the-reconstruction-process/
 Isidora Barroso: http://isibarroso.blogspot.com/